Foomka Cabashada Takoorista ee Metro | Metro
Lambar Teleefon (Guriga)
Lambar Teleefon (Shaqada)
Qofka lagu sameeyay takooris (haddii uu yahay qof aan adiga ahayn)
Kuwan soo socda kee baa sida ugu fiican u sharaxaya sababta aad u aaminsan tahay in takooris dhacday?
Sinji/Qowmiyad Cayn Lab ama Dhedig
Waa tee taariikhda (taariikhaha) ay takoorista la sheegay dhacday?
Sharax takoorista la sheegay. Sharax wixii dhacay iyo cidda aad rumeysan tahay inay mas’uul ka tahay.
Intaad riixdo gudbi, waxa aad oggolaanaysaa in: (1) aad akhriday, fahamtay oo aqbashay qodobada habdhaqanada ee raacdeynta iyo baadhista cabashooyinka Title VI iyo (2) waxa aad xaqiijinaysaa in macluumaadka sare run yahay intii aad ka warqabtid garashadaada ugu fiican.
Waxa aad ku soo diri kartaa iimayl ama wixii ah qoraalo ama macluumaad kale ee aad u maleynaysid inuu muhimad u leeyahay cabashadaada ku soo hagaaji: